Sidee loola dagaalamaa dhibaatada dalaga beeraha? Tilmaam: Ka qaybgal beeralayda
Biowsity International waa urur cilmi baaris oo caalami ah oo horumarineed oo leh aragtida dadka nafaqo leh iyo in la sii wado meeraha iyada oo loo marayo kala duwanaanshaha beeraha. Waxay la shaqeeyaan ururada dalalka dakhligoodu hooseeyo ee gobollada beeraha iyo geedaha kala duwan ee beeraha ay ka qayb qaadan karaan nafaqada, kor u qaadka, waxsoosaarka, iyo isbadelka cimilada.
Iyadoo ay sabab u tahay dhaqdhaqaaqa xakamaynta cudurrada, wax-soo-saarka celceliska beeraha ayaa kordhay, taasoo u ogolaanaysa beeralayda in ay iibiyaan muuska oo dheeraad ah suuqa oo ay u helaan xasilooni dhaqaale qoysaskooda iyo bulshadooda.
Xaaladda maciishadda ee Bariga iyo Bartamaha Afrika ayaa si halis ah u handadaya Banana Xanthomonas Wilt, oo ah cudur xun oo keenaya in ka badan 100% khasaaro iyo si xun u waxyeeleeyeen nolol-maalmeedka iyo ammaanka cuntada ee beeraleyda beeraleyda ee gobolka oo dhan. Dalka Ugandha, Biibiity International ayaa xoojiyay awoodda boqolaal beeraley ah si ay u maamulaan cudurka. Dhaqdhaqaaqyo fudud sida burburinta dhirta cudurka qaba, ka saarida burooyinkeeda labka ah, iyo jeermi-dilka qalabka beeraha ayaa tallaabooyin wax ku ool ah ka hortagaya Banana Xanthomonas Wilt. Beerashada ayaa fursad u siinaysa beeralayda fursad ay ku bartaan xirfadahan iyo fursadaha kale ee xakamaynta cudurrada iyada oo loo marayo kulannada gobollada, booqashada isbeddelka beeraleyda, iyo dugsiyada beeraleyda.
Inkasta oo ficiladani ay ahaayeen kuwo wax ku ool ah si loo xakameeyo cudurka xeryaha, haddana isla markiiba ma aysan ansixin beeralayda. Hay'adda Biibiity International iyo la-hawlgalayaasheeda ayaa wax ka beddelay qaabka ay u samaysay istiraatiijiyad cusub oo lagu magacaabo "Barashada iyo Tababarka Horumarinta ee Beeralayda." Sida ku cad habkan, teknoolajiyada iyo hababka ay soo saareen cilmi-baarista waxaa baari kara oo ay ansixiyeen beeraleyda iyo daneeyayaasha kale ee khuseeya silsiladda qiimaha. Tani waxay siinaysaa beeralayda lahaanshaha waxa ay barteen, taas oo ka dhigaysa inay u badan tahay inay qaataan dhaqamada cusub. Si la mid ah, qalabku wuxuu u dammaanad-qaadayaa Khatarta iyo la-hawlgalayaasheeda si ay uga jawaabaan baahida ugu haboon ee beeralayda.
Natiijada waxqabadyada xakamaynta cudurrada ee waxtarka leh, celceliska waxsoosaarka beertu wuxuu kordhay 5-10 rucubood halkii acre toddobaadkii ilaa 15-20 rucubo, oo u oggolaanaya beeralayda inay iibiyaan muuska oo dheeraad ah suuqa oo ay helaan deganaansho dhaqaale qoysaskooda iyo bulshadooda. Dhisida waayo-aragnimada iyo qalabyada la sameeyey intii lagu jiray mashruuca, Biibiity International waxay horumarineysaa marxaladda labaad si kor loogu qaado hirgelinta habab waxtar leh ee maamulka-maamulka.